Ederede Frank Bria na Martech Zone |
Edemede site na Ọnye na -bụ Frank Bria?
Ọnye na -bụ Frank Bria?
Frank Bria bụ ọkachamara ọkachamara na tiketi tiketi. Ọ malitere ọrụ azụmaahịa ya na ngalaba teknụzụ ọrụ ego. Ya na ọtụtụ ndị malitere ọrụ, ụfọdụ na-ere ihe ruru narị nde kwuru nde, ma ụfọdụ na-ada ire ọkụ. Ahụmahụ ya gụnyere inyere ụfọdụ ụlọ ọrụ kachasị na kọntinent 5 aka ịzụlite azụmaahịa ha site na imetụta ndị ahịa ha ezigbo - na ịtụgharị nke ahụ ka ọ bụrụ onyinye na-enweghị atụ.
Ọ na-atụgharị ahụmịhe ahụ na ngalaba obere azụmaahịa. Ọ na - arụkọ ọrụ na ndị na - ahụ maka ndụmọdụ, ndị na - enye ọrụ azụmaahịa, yana ndị ọkachamara ndị ọzọ iji gbanahụ “ọrụ sitere na ya” na ego a na - enweta kwa awa - na - enwekarị azụmaahịa maka ego. Ndị ahịa Frank na-ewulite azụmaahịa ha gburugburu ọrụ arụpụtara ebe ị na-eji oge gị gafee ọtụtụ ndị ahịa - ọ bụghị naanị otu.
Ọ bụ onye edemede nke akwụkwọ kacha mma ere ahịa n'ọtụtụ mba ụwa: Otu esi etolite azụmaahịa gị site na ịrụ obere ọrụ. O bi na Gilbert, Arizona na mpaghara Phoenix ya na nwunye ya na ụmụ nwanyị 3.
Download Frank's Ebook: Iwulite A Business Service: 3 Echiche Keepgha Na-edebe Gị Broke